खोपको उत्पादन तथा वितरण अति चुनौतिपूर्ण: डब्लुएचओ – Halkhabar kura
९ बैशाख २०७७, मंगलवार १०:२४
खोपको उत्पादन तथा वितरण अति चुनौतिपूर्ण: डब्लुएचओ
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अति तीव्र गतिमा निर्माण भए पनि त्यसको उत्पादन तथा वितरण अति कठिन हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
डब्लुएचओको आपतकालीन कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डा. माइकल रायनले सोमबार खोप चाँडै बने पनि त्यसको पर्याप्त उत्पादन तथा वितरण अति चुनौतिपूर्ण रहेको बताएका हुन् ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका व्यक्तिको उपचार वा भाइरसविरुद्धको खोप अहिलेसम्म बनेको छैन । विश्वभरका दुई दर्जन भन्दा बढी कम्पनीले खोपको उत्पादनका लागि काम गरिरहेको बताइसकेका छन् । त्यसमध्ये कम्तिमा तीनवटा सम्भावित खोप अहिले मानवीय परीक्षणको चरणमा छन् ।
अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युड अफ एलर्जी एण्ड इन्फेक्सिअस डिजिजका निर्देशक डा. एन्थोनी फाउचीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अझै कम्तिमा १८ महिना पर रहेको अर्थात डेढ वर्षपछि मात्रै प्रयोगमा आउन सक्ने बताएका छन् । अरु विज्ञले सो समयावधी पनि अति आशावादी भएको बताउने गरेका छन् ।
अहिले सही खोप पत्ता लगाउनमा अनुसन्धानकर्ता लागेका छन् । सही खोप बनेपछि विश्वको माग पूरा हुने गरी त्यसको उत्पादन गरिने पर्ने डब्लुएचओको आपतकालीन कार्यक्रमका कार्यकारी निर्देशक डा. रायनले बताए ।
खोपको वितरणर महामारीको अवस्था र माग अनुसार सबै क्षेत्रमा समान रुपले हुनु पर्ने पक्षमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले विगत दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको र कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको वितरण पनि सोही आधारमा हुनु पर्ने उनले बताएका छन् ।
Previous डाक्टर कु-ट्ने- डीएसपीविरुद्ध का-र-बा-ही भएन, पुन: काममा फर्किए
Next अमेरिकाले आप्रवासीलाई अस्थायी रुपमा रोक्ने आदेशमा ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्दै